नेपालमा चैतदेखि ‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन: माइलेज र इञ्जिनको आयु बढ्ने, प्रदूषण घट्ने !
काठमाडौं–नेपालमा अब ‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन प्रयोगमा ल्याइने भएको छ ।
इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले मार्च २० तारिख अर्थात् आगामी चैत ७ गतेदेखि ‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन प्रचलनमा आउने जनाएको छ ।
‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन प्रयोगमा आएपछि प्रदूषण कम हुने, इञ्जिनको आयु बढ्ने तथा माइलेज पनि बढी दिने नेपाल आयल निगमको दाबी छ । नेपालमा हाल ‘युरो फोर’ मापदण्डको इन्धन प्रयोग हुने गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले २०२० मार्च २० तारिखदेखि ‘युरो–सिक्स’ मापदण्डको इन्धन कारोवार गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन वातावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ ।
‘मार्च २० पछि ‘युरो –सिक्स’ नै प्रयोगमा आउँछ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘युरो सिक्स’ इन्धन वातावरणमैत्री हो र यसले प्रदूषण उत्सर्जन कम गर्छ ।’
‘युरो– सिक्स’ मापदण्डको इन्धनमा सल्फरको मात्रा न्यून हुने भएकाले यसबाट चल्ने गाडीहरूले कम प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उनले बताए ।
यसमा सल्फरको मात्रा १० पीपीएम मात्रै हुन्छ, जसले गर्दा प्रदूषण कम उत्सर्जन हुने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘युरो फोर’मा सल्फरको मात्रा ५० पीपीएम हुन्छ ।
‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन प्रयोगमा आएपछि सवारी साधनको इञ्जिन चाँडै बिग्रिने सम्भावना कम हुने र माइलेज पनि बढ्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘युरो सिक्स मापदण्डको इन्धनले न्युन परिमाणमा धूवाँ उत्सर्जन गर्दा तुलनात्मक रूपमा प्रदूषण पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सवारी साधनले माइलेज पनि 'युरो फोर'को भन्दा बढी दिन्छन्, ।’
उनका अनुसार ‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन नेपालमा प्रयोगमा रहेका सबै किसिमका सवारी साधनमा प्रयोग गर्न मिल्छ । मोटरसाइकल, स्कूटर, बस, ट्रक, जीप, कार लगायतका सबै किसिमका सवारी साधनमा उक्त मापदण्डको इन्धन प्रयोग गर्न सकिन्छ । युरो सिक्स मापदण्डको इन्धनका लागि नेपालमा सञ्चालमा रहेको सवारी साधन र नेपाली सडक उपयुक्त रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भारतको मथुराबाट करीब एक महिनाअघि ‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन ल्याएर नेपालमा परीक्षण समेत भइसकेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
‘हामीले टेस्ट गरिसकेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रा यहाँका सवारी साधन र सडक त्यसका लागि उपयुक्त छन् ।’
नेपालमा सन् २०१७ अप्रिलदेखि ‘युरो फोर’ मापदण्डको इन्धन प्रचलनमा आएको हो । त्यसअघि ‘युरो थ्री’ मापदण्डको इन्धन नेपाली बजारमा चलनमा रहेको थियो । ‘युरो थ्री’ मापदण्डको इन्धनमा सल्फरको मात्रा ३५० पीपीएम हुन्छ ।
मूल्य केही बढ्ने
इन्धनको गुणस्तर बढ्दा मूल्य पनि केही बढ्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । कति बढ्छ भन्ने कुरा भने अहिले नै भन्न नसकिने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘आईओसीले नयाँ मूल्यसूची नपठाएसम्म कति बढ्छ भनेर भन्न सकिन्न,’ निगम प्रवक्ता गोइतले भने ।
भारतले गुणस्तर सुधार्दा नेपललाई पनि फाइदा !
नेपालको इन्धन बजार पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर छ । भारतले जुन मापदण्डको इन्धन चल्तीमा ल्यायो नेपालले पनि त्यही मापदण्डको इन्धन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतले पनि आगामी मार्च अन्तिमदेखि आफ्ना सबै शहरमा ‘युरो सिक्स’ मापदण्डको इन्धन प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । अहिले भारतमा पनि ‘युरो– फोर’ मापदण्डकै इन्धन चल्तीमा छ ।
भारतले युरो फोरलाई ‘भारत स्टेज फोर’ 'युरो सिक्स'लाई ‘भारत स्टेज सिक्स’ भनेर परिभाषित गर्दै आएको छ ।
भारतमा ‘युरो– फोर’ मापदण्डको इन्धन पूर्ण रूपमा २०१७ देखि नै चलनमा आएको हो । भारतका केही शहरमा भने युरो फोर २०१० देखि नै चल्तीमा थियो ।
नेपाल लाइफ र भन्सार विभागका प्रमुखबीच भेटवार्ता
सञ्चालन हुँदै जनकपुर–जयनगर रेल